Akụkọ - Otu esi ahazi akara ngosi nkeonwe gị, usoro nhazi ọkachamara na -azọpụta oge na mbọ gị.
1, Zipu faịlụ logo
Maka nhazi nke akara, biko ziga faịlụ isi akara na AI ma ọ bụ usoro PDF. Faịlụ akara doro anya nwere ike inyere anyị aka igosipụta mbipụta nke akara ngosi mgbe ị na -ebi akwụkwọ. Ọdịdị onyonyo a ga -agbachapụ agbachapụ, yabụ na anyị anaghị akwado iziga faịlụ akara n'ụdị Ọdịdị. Ọ bụrụ na enweghị faịlụ isi, onye nrụpụta anyị nwekwara ike inyere ndị ahịa aka iji sọftụwia Adobe Illustrator mee akara ngosi ụdị n'ime AI ma ọ bụ faịlụ PDF, mana nke a ga -ewe oge.
2, Kpọtụrụ ọnọdụ na usoro mbipụta nke akara ngosi
Ndị otu anyị na -ere ahịa ga -ekwurịtara ndị ahịa ngwa ngwa ebe ekwesịrị idobe logo ahụ, kọwaara onye ahịa ya nkọwa yana ọ dịkwa mkpa ka ya na onye ahịa gosi ụcha, nha na usoro mbipụta nke akara ngosi ahụ. Maka ngwaahịa ngwaahịa dị njikere, anyị na -akwado mbipụta 3D UV ugbu a, yana maka ngwaahịa ahaziri iche, anyị na -akwado ibipụta ihuenyo silk, mbipụta 3D UV, stamping ọkụ, wdg.
3, Kwenye ntụgharị okwu
A ga -eme eserese iji gosi onye ahịa ihe akọwapụtara nke ọma, ọ bụrụ na mgbanwe ọ bụla, onye ahịa ahụ nwekwara ike ịhazigharị akara ahụ dabere na mmetụta egosipụtara ọzọ.
4, Nkwenye nke nlele anụ ahụ tupu mmepụta
Tupu imepụta oke, anyị ga-eme ndokwa ịme nlele anụ ahụ dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị n'ime ụbọchị ọrụ 3-4, wee see onye ahịa ahụ foto anụ ahụ iji gosipụta mmetụta ọzọ.
5, bido imepụta oke n'ikpeazụ
Mgbe ekwenyechara ihe niile, anyị ga -ahazi ịmalite imepụta oke dịka nsonaazụ nke nnwale ndị enwetara. A na -ekpebi usoro a kapịrị ọnụ nke mmepụta uka dabere na oke nke nnukwu. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, okirikiri mmepụta nke lashes ụgha dị njikere dị n'ime ụbọchị ọrụ 7-10, yana usoro nrụpụta nke lashes ahaziri bụ n'ime ụbọchị ọrụ 15-25. Ọ bụrụ na iwu onye ahịa chọrọ ngwa ngwa, dabere na ọnọdụ ahụ, enwere ike ịtụle nhazi nhazi.
Oge nzipu: Dec-09-2020
Anya anya, Ndị na -ere ntutu anya, eyeliner, egbugbere ọnụ, Mgbatị ntutu anya, mink lashes,